Inona no Malaza Amin’ny Aterineto Ao Okraina Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jona 2014 15:13 GMT
Komandin'ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Donetsk Igor Strelkov (Girkin) amin'ny ankavia. Komandin'ny mpirotsaka an-tsitrapo ao Donbass Semyon Semyonchenko amin'ny ankavanana.
Raha tazanina ho tsy mana-piatoana ny herisetra any Okraina atsinanana, dia manohy amin'ny fampiasana ny tambajotran-tserasera kosa ireo milisy roa mifanandrina, ahitana ny andia-tafiky ny mpirotsaka an-tsitrapo manohana an'i Okraina antsoina hoe “Donbass” sy ny Tafiky ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Donetsk (RPD), ho fampitàna ny fizotran'ny hetsika (fanentanana) ara-miaramila ataon-dry zareo.
Miditra ao amin'ny Facebook i Semion Semiontchenko, avy amin'ny andia-tafika Donbass, hamoahany ireo vaovao tselatra mahafaly. Vao faramparany teo izy izao no naka mpiady teo amin'ny kianja Maïdan, toerana nahitana herisetra nandritra ny ririnina, ampidirina ho milisy ao aminy. Misy ireo mpikatroka no efa nody any an-trano, fa misy kosa ny sasany hita misafidy ny hanohy ny ady miaraka amin'i Semiontchenko — araka ny nambaran'ity farany dia manana mpirotsaka an-tsitrapo mihoatra ny 800 ny “Donbass” manao fanazara-tena ao amin'ny tobin'ny Mpiambina Nasionaly Okrainiana ao Novye Petrovtsy.
Voasoratra amin'ny voambolana ara-potokevitra ny hafatr'i Semiontchenko. Toy izao ny nosoratany omaly, ho setrin'ny mety ho fisian'ny fifampiraharahana amin'ny mpisintaka avy ao Donetsk:
Manohitra ny fifampiraharahana amin'ny mpampihorohoro, izay fantatra fa mpaka an-keriny, mpamono olona ary mpikarama an'ady mbamin'ny mpiady miaramila ny andia-tafika Donbass, ary manohitra izay mety ho fifampiresahana isian'ny “fampitsaharana ady.” Lalana tsy mitondra mankaiza izany. Tsy mino izahay fa ho tanteraka ny zavatra tahaka izany. Manantena izahay fa vaovao diso izany. Izany ho hevitray amin'ny maha-olompirenen'i Okraina anay.
Mazava loatra fa amin'izao fisian'ny fahafatesana mety ho vitsy ary mety mahatratra an-jatony eo amin'ny andaniny sy ny ankilany izao, dia azo heverina ho paikady mety ny fampitsaharan'ady sy ny fifampiraharahana. Tsy mazava loatra moa raha mieritreritra i Semyonchenko fa ho voavaha ny toe-draharaha raha tsy misy ny fipetrahan'ny roa tonta hifampiraharaha. Fa raha izany, dia mety hitarika ireo mpitariky ny mpisintaka, tahaka ilay mpitarika ara-miaramila manana endrika mampalahelo hatrany antsoina hoe Igor Strelkov hampitombo avo roa heny ny herisetra izany.
Manohy amin'ny famoahany vaovao farany sy ny toe-draharaha misy azy ao amin'ny kaonty Livejournal iray mandray azy tsara i Strelkov, na dia hoe miparitaka ao amin'ny RuNet amin'ny alalan'ny Facebook sy ny VKontakte aza ireny vaovao fohy ireny. Vao nifanesisesy moa tao anatin'ny andro vitsivitsy izay ny vaovao navoakany, hatramin'ny nampitomboan'ny tafika Okrainiana ara-dalàna ny tsindry tamin'ny foiben'ny mpioko, ao amin'ny tanàna kely saingy miorina amin'ny toerana stratejika ao Slavyansk. “Nanamarina” i Strelkov ohatra, fa nahazera voromby sy angidimby miaramila maro tamin'ny alalan'ny tafondro mpitifitra fiaramanidina avy ety an-tany sy balafomanga MANPAD famelezana fiaramanidina ny vondro-tafiky ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Donetsk, ary ny farany teo dia fiamaranidina miaramila mpijery mialoha ny lalana aleha (nilaza moa ny Okrainiana fa mamita iraka fanampiana mahaolona [vonjy taitra] io voromby io).
Nilaza ihany koa i Strelkov fa efa nandao ny sambo, ka lasa niverina any amin'ny sisintany Rosiana ireo andia-tafika “Cossacks” maro avy any Rosia sy toeran-kafa maro ao Okraina tonga tany Slavyansk hanampy ny mpisintaka. (Azo heverina fa ireo andia-tafika Cossack ireo no nifandona tamin'ilay mpampihororoho amin'ny voatabia Murz [tatitra Global Voices teny anglisy] herinandro maromaro lasa izay.)
Amin'ny zavatra manahirana kokoa, nanambara i Strelkov fa nandarohana ny toerana misy ny pioko tao an-tanànakelin'i Semyonovka ny balafomanga misesisesy antsoina hoe “Grad”. Fiampangana henjana izany, satria malaza ho fitaovam-piadiana tsy manana kinendry manokana ny “Grad” fa natao handravana faritra iray manontolo (nalaza ratsy tamin'ny nanaovany ny tananan'i Grozny hilamaka (hirodana) tanteraka nandritra ny ady faharoa natao tao Chechenia). Nilaza anefa i Strelkov fa hatramin'izao dia tsy nampiasaina feno io fitaovam-piadiana io:
Nampiasa “Grad” namelezana an'i Semyonovka mihitsy ry zareo tamin'ny 3 Jona. Fa balafomanga iray ihany no nalefan-dry zareo fa tsy ny taranjany iray [narefodrefotra].
Hihamahery vaika ve ny herisetra, ka raha izany, inona ny marika hamadihan'i Okraina ny bemidina manenjika mpampihorohoro ataony ho lasa ady feno ?